Iwu Iwu | Law & More B.V.
Iwu ịkwụ ụgwọ » Ekwu maka mmebi iwu
Applieskpụrụ dị mkpa dị na iwu mgbapụta Dutch: onye ọ bụla na-ebu mmebi nke ya. N'ọnọdụ ụfọdụ, ọ nweghị onye nwere ike ịkwụ ụgwọ. Dị ka ihe atụ, chee banyere mbibi n'ihi akụ́ mmiri ígwé. Ọ bụ mmadụ mebiri gị? N'okwu ahụ, enwere ike ịkwụghachi mmebi ahụ ma ọ bụrụ na enwere ihe kpatara iji jide onye ahụ.
YOU KWES WITHR WITH WITHB DRAM AMBỌCHAM ỌR.
Ekwu maka mmebi iwu
> Liabilit nkwekọrịta
> Ibu iwu
> Ofdị mmebi
> Nkwụghachi ụgwọ zuru oke maka ihe mebiri n'ezie
> Amụma mkpuchi megide mbibi
> Omume klaasị
Enwere mmebi ma ọ baghịkwa amụma? Ya bụrụ nke ahụ, ihe ndị si na mmebi ahụ agaghị enwe ike ịzọrọ nke ọzọ site n'aka ndị ọzọ. Oge ụfọdụ, aga-ebu ụzọ zi ọkwa maka ndabara iji nye onye nke ọzọ ohere ịmezu ọrụ ya yana n'ime oge ezi uche. Ọ bụrụ na ndị ọzọ na-emezughị ya ọrụ, nke a ga-eme na ndabara na akwụ ụgwọ nwekwara ike azọrọ.
Law & More nwekwara ike imere gị nke a
Onweghi onye na-edebe oge oru ha? Anyị nwere ike izipu ihe nchetara ederede na ịgba akwụkwọ maka gị
Nkwekọrịta ikuchi nwa
De nkwekọrịta gụnyere nnukwu ọrụ. Ya mere kpoo enyemaka nke
Ọ ga-amasị gị inweta nkwado maka ịhazi nkwekọrịta ọrụ? Kpọọ Law & More
E nwere ọtụtụ ọnọdụ ebe iwu ịkwụ ụgwọ dị rụọ ọrụ
Ọ bụrụ na achọrọ ihe achọrọ ma ọ bụ nkwekọrịta obodo, a ga-ekwupụta nkwụghachi ụgwọ. Mmebi nke ruru eru ịkwụ ụgwọ na Netherlands sokwa mfu ego na mfu ozo. N'ebe mfu ego metụtara ọnwụ ma ọ bụ mfu nke uru a tara ahụhụ, ọghọm ndị ọzọ metụtara ahụhụ ahụhụ. Na ụkpụrụ, mmebi ihe onwunwe na-abụkarị nke zuru oke maka ụgwọ, ihe ọghọm ndị ọzọ abaghị uru dịka iwu nyere na ọtụtụ okwu.
Kpụrụ a pụtara na a gaghị akwụghachi onye mebiri emebi nke ihe mmebi mmebi ihe karịa mbibi ya zuru oke. Ederede 6: 100 nke Dutch Civil Code na-ekwu na ọ bụrụ na otu ihe ememme ahụ abụghị naanị na-akpata mmekpa ahụ metụtara, mana ọ na-ewetakwa ụfọdụ uru, a ga-akwụrịrị ụgwọ a mgbe ị na-ekpebi mmebi a ga-akwụghachi ya, na nke a bụ ihe ezi uche dị na ya. Enwere ike ịkọwa uru dị ka nkwalite ọnọdụ (nnabata) ọnọdụ nke onye a metụtara n'ihi ihe mmebi ahụ.
Ọzọkwa, a gaghị akwụghachi mmebi ahụ ụgwọ mgbe niile. Omume dị ọcha nke onye a tara ahụhụ n'onwe ya ma ọ bụ ọnọdụ dị na ebe onye nwere oke ihe metụtara na-arụ ọrụ dị mkpa na nke a. Ajụjụ a ga-ajụrịrị bụ ihe ndị a: onye ọ bụla e mesoro ihe ọ̀ ga-eme ihe dị iche karịa ka ọ mere gbasara ihe mebiri ma ọ bụ nbibi ahụ? N'ọnọdụ ụfọdụ, onye ahụ nwere ike ịkwụ ụgwọ mebie mmebi ahụ. Nke a gụnyere ọnọdụ inwe ihe mgbanyụ ọkụ ọ bụla tupu ihe mmebi ahụ, dịka ọkụ. Ọ nwere mmejọ ọ bụla dị n'ahụ onye ahụ? Na ya, omume culpable omume na ụkpụrụ na-eduga na mbelata ọrụ nkwụghachi ụgwọ nke onye ahụ kpatara mmebi ahụ na ihe ahụ mebiri ga-agharịrị n'etiti onye ahụ mebiri ihe na onye ahụ mebiri. N'aka ozo: akụkụ buru ibu nke mbibi ahụ na-akwụ ụgwọ ihe onye ahụ metụtara. O gwụla ma onye ahụ ọ metụtara metụtara mkpuchi maka ya.
N'ọnọdụ ụfọdụ, ịme klaasị nwere ike bụrụ ihe ọzọ na-adọrọ adọrọ maka usoro mmadụ nwere ike ịme. Nke a ga-akacha dịrị gbasara ịgbasa mmebi: ngụkọta nke mbibi ndị ihe a metụtara buru nnukwu, mana ihe ọ bụla mebiri na-adị ala. N'okwu ahụ, ụgwọ a ga-akwụ ya ga-abụkarị karịa ụgwọ ọrụ nke usoro a, itinye ego oge na ihe ọghọm nke onye ọ bụla mebiri. Na mgbakwunye, ndị na-akpata mbibi dị otú a na-abụkarị nnukwu ndị maara usoro iwu ma nwee ego zuru oke iji gbaa ikpe.
Kemgbe Jenụwarị 1, 2020, Clakpụrụ Iwu Maka Mkpebi Ndị Dị Elu amalitela ịrụ ọrụ. Nke a emeela ka ndị ọzọ merụọ ahụ, ndị otu ihe ma ọ bụ ihe mere na-akpata mbibi ya na nke naanị otu ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ mmadụ (iwu) nwere ike ịkwụ ụgwọ maka mkpokọta nkwụghachi ụgwọ site na otu mmasị. Ugbua enwere otu usoro maka ihe klaasị n'okpuru Nkebi 3: 305a nke Dutch Civil Code, n'agbanyeghị agbanyeghị na ha na-akwụ ụgwọ maka ego ma ọ bụ na ha anaghị akwụ ụgwọ.